Aragtiwanaagsan.com – Waa maxay buuqan iyo sawaxankan ka baxayaa Wasaaraddii Warfaafinta Somaliland??!!
Waa maxay buuqan iyo sawaxankan ka baxayaa Wasaaraddii Warfaafinta Somaliland??!!
Feb 27, 2018 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka 0
Saxaafaddu waa shay aan aad iyo aad u xiiseeyo,waa shaqo qurux badan oo dad badan ku bareysa, laakiin marka aan galo Wasaaradda Warfaafinta Somaliland,ayaan nacaa shayga saxaafadda la yidhaahdo ba,anigu waxaan ahay macalin dhiga luuqadaha…Saxaafaddana aad iyo aad ayaan ugu xidhanahay haddii ay noqoto tan Somaliland iyo ta caalamkaba,Wali maan maqal wasaarad Warfaafineed oo dunida ku taal oo buuq iyo sawaxan la mid ah,kan ka taagan wasaaradda Warfaafinta Somaliland la mid ah.hadaba,maxaa sabab u ah,buuqan iyo sawaxan kan markasta oo Wasiir cusub la magaabo?? Waa su’aal da’ weynoo maxa daalineysa!!!???Wasaaradda Warfaafinta Somaliland waa meel ka madhan Aqoonta Saxaafadda dunida laga yaqaano oo ah,(Xirfad iyo Han iyo barnaamijyo sameyn),!! Waa meel ku caan baxday,wax aynu ku soo koobi karno laba eray oo kala ah(Canaadnimo iyo Fajji)!! Wariyayaasha jooga Wasaaradda Warfaafinta Somaliland, boqolkiiba %90 u ma qalmaan in ay noqdaan Saxafiyiin ama Wariyayaal. Sababtoo ah,Ma
karafoon waa la iska qaadan karaa Somaliland…laakiin looguma talo galin in la iska qaato makarafoon adiga oo aan lahayn(Xirfad saxaafadeed caalamiya iyo Aqoon-saxafadeed oo ay kow ka yihiin,Luuqadaha ay ka mid yihiin,Ingiriisiga,Carabiga, oo qasab ah,marka lagu daro Afkaaga-Hooyo)!! Ma jiro wali intay Somaliland jirtay …Wariyi ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo Tilifeeshan Caalamiya Wareysi siiyey isaga oo ku hadlaaya …Afafka Caalamiga ah,oo uga waramay Waxa ay Somaliland tahay iyo waxa ay dooneyso!!!Ma jiro Saxafi ama wariye ka tirsan Wasaaradda warfaafinta Somaliland,oo ay idaacadaha iyo Tvyada Caalamig ahi, yaqaanan oo ay la soo xidhiidhaan marka ay Somaliland wax ka dhacaan ama ay macluumaad uga baahdaan….!! Mar jiro Wariyayaashaasi isku dhex baacsanaaya Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ama qayladooda laga seexan waayay….mid ka qayb gala dunida doodaha ka socda iyo falanqaynta Arrimaha dunida ka taagan oo la yidhaahdo, Kaasi waxa uu ahaa, Wariye ama saxafi ka tirsan…Radio hargeiysa ama Somaliland National TV. !!Dawladda dagaalku halakeeyey ee Somalia ..Wariyayaasheedu ama saxafiyiintoodu…markasta idaacadaha iyo Tvyada adduunka way ka muuqdaan….Wayna ka qaybqaataan….doodaha dunida ka socda…….ama war
Bixinno caalamiya ayey diraan!!! Walina maan maqal Wasaaradda Warfaafinta Soomaalia,Jabuuti,Kiiniya,Itoobiya, buuq iyo sawaxan baa ka taagan!! Hadaba,haddii aan mowduucaygan hoos ugu soo daadago….buuqan iyo sawaxankan ka taagan Wasaaradda Warfaafinta Somaliland,waxa ugu wacan ama sababaaya…..Xirfad iyo han iyo Af-ajanibi la’aanta haysata wariyayaasha ama saxafiyiinta Wasaaradda Warfaafinta Somaliland!!!,haddii ay intaasi yeelan lahaayeen…..,isku may dhajiyeen dayrkan kooban ee ku yaalla Somaliland teenan aan wali la ictiraafin,ee Warbaahinta caalamiga ah,ayay ka wada shaqo gali lahaayeen! Waxaanan kula talin lahaa…dhammaan akhyaartaasi aanu saaxiibka nahay ee ka hawlgasha Wasaaradda warfaafinta Somaliland in ay ka qalin jabiyaan..Radio hargeisa iyo Somaliland National Tv, oo ay bartaan luuqadaha kala ah,(ingiriisiga iyo Carabiga) si ay uga shaqo galaan..Warbaahinta Calamka oo ay bal Somaliland u soo jiidaan indhaha-Caalamka.Waxaan kaloon kula talin lahaa….bal in ay hadda bilaabaan in ay hankooda ku sii jeediyaa…..BBCda,Afka-Soomaaliga,gaar ahaan…Istuudyaha-London iyo ka VOA ee Washington…in ay Wareeraraan oo ay shaqooyin ka raadsadaan..wixii hadda ka dambeeya… oo ay iska dhaafaan….in ay isku dhex haystaan markasta oo Wasiir cusubi yimaado….ama xil ka qaadis la sameeyo…!!!haddii Wariye ka tirsan Wasaaradda Warfaafintu ka hawl gali lahaa BBCda,Afka-Soomaaliga ama Carabiga,ama ingriisiga,…intii ay Somaliland jirtay,oo la heli lahaa Wariye HAN..yeeshay oo halkaasi beegsaday…Horaa loo socon lahaa……..!!!! uga dambeyntii Wariyaha qudha ee aan halkan ka ammaanayaa waa ninka la yidhaahdooo (Xuseen Kurdi),aanan waligay arag sida uu u eegyahay, waa ninka qudha ee aanan ka garaneyn Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.dhammaan Wariyayaasha Wasaaradda Saaxiibo ayaanu nahay oo waanu isnaqaanaa,Xuseen kurdi…Waa Wariye xogtiisa uu diyaariyo habeen walba aanu daawano…Wariyaahaasi oo kaleba bal aan dhalliilno….!!!!
Macalin dhiga luuqadaha./Aqoonyahan School for English!!
Ururka Aqoonyahanka Somaliland iyo Cilmi baadhista oo Casho sharaf ku maamusay wasiir ku xigeenka Qorshaynta Somaliland!! Hees Cusub Xasan Adan Samatar